Arabia Saodita · Desambra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Arabia Saodita · Desambra, 2017
Tantara mikasika ny Arabia Saodita tamin'ny Desambra, 2017
Ejipta 24 Desambra 2017
Tsy ireo bilaogera miteny Anglisy avy any Afovoany Atsinanana irery ihany no miezaka tsy an-kiato mampitohy ny hantsana ara-kolontsaina, fa misedra ady mitovy amin'io koa ireo bilaogera miteny Arabo ao anatin'ny tontolon'ny bilaogy Arabo. Mitsikera ny sasany amin'ireo fady anatin'ny rafitra misy azy ireo mpandalina ny finoana Silamo.
Mediam-bahoaka 21 Desambra 2017
Bahrain 20 Desambra 2017
Rehefa nahita ireto sary ireto aho, dia nieritreritra : ondry=Nouvelle Zélande. Izany hadisoako ! Rehefa jerena akaiky, tsy dia tena maitso ny bozaka ary misy satrana erỳ ampara tazana. Tena akaiky be ny toerana misy ahy nòho ny noeritreretiko ity. Atombontsika amin'i Riad, renivohitri'i Arabia Saodita, ny fitsidihantsika ireo bilaogy an-tsary ao Afovoany...
Fivavahana 17 Desambra 2017
Afrika Mainty 15 Desambra 2017